योगदान – शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
समाजिक अर्थिक बिकाश को लागि शिव शिखर
शिव शिखरको कृषि एम्बुलेन्स सेवा : कृषक दंग, उपभोक्ता खुशी
लकडाउनको समयमा शिव शिखरको कृषि सहकारी संस्था लि. को कर्मचारीहरु कृषकको बारीमा हरेक दिन पुग्दछन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उचित मुल्यमा सहकारी संस्थाले खरिद गर्दछ । बारीबाट खरिद गरेको तरकारी लिएर सहकारीका कर्मचारी पोखराको चोक चोकमा हरेक दिन पुग्दछन् । कृषकसँग खरिद गरेकै मुल्यमै सहकारीले पोखरेली उपभोक्तालाई बिक्रि गर्ने गर्दछ ।
यसरी हरेक दिन शिव शिखर सहकारीले पोखरेली उपभोक्तालाई हरियो तरकारी कृषककै मुल्यमा र खाद्यान्न सामग्री विक्रि गर्दै आएको छ । संस्थाले गरेको यो कामबाट कृषक र उपभोक्ता दुबै लाभान्वित भएका छन् । कृषकको उत्पादनले उचित बजार पाएको छ भने उपभोक्ताले सुलभ मुल्यमा हरियो तरकारी उपभोग गर्न पाएका छन् । पोखराका गाउँ गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी बारीबाटै विक्रि हुँदा कृषि दंग छन् । तोकिएकै मुल्यमा बारीबाटै तरकारी विक्रि हुँदा र पैसा तुरुन्तै पाउँदा उनीहरु दंग छन् ।
यता उपभोक्ताहरु प्नि स्थानीय उत्पादन खान पाउँदा खुशी छन् । लकडाउनको समयमा चोक चोकमा तरकारी पाउँदा र स्थानीय उत्पादन खान पाउँदा उपभोक्ता खुशी देखिएको संस्थाका बजार प्रबन्धक तथा कृषि एम्बुलेन्स सेवाका संयोजक ऋिषिराम पाठक बताउनुहुन्छ ।
पोखरा महानगरपालिसँग सहकार्य गरेर शिव शिखर कृषि सहकारी संस्था, पोखराले ‘कृषि एम्बुलेन्स सेवा’ मार्फत यो जनसेवामुलक कार्य गरिरहेको छ ।
‘कृषकको तरकारी कृषककै मुल्यमा, उद्देश्य नाफा होईन जनसेवाको लागि’ भन्ने उद्देश्यका साथ निरन्तर सेवा प्रवाह सहकारीले गर्दै आएको छ । बैशाख २५ गतेबाट सुरु भएको यो सेवा निरन्तर रहेको उहाँको भनाई छ । आईतबार संस्थाले छोरेपाटन, डेबिजफल्स लगायत वरपरका टोलहरुमा तरकारी तथा खाद्यान्न विक्रि गरेको थियो । बिहान ७ बजेदेखि १२ बजेसम्म दैनिक सेवा प्रदान गर्दै आएको पाठकको भनाई छ । दैनिक ३ सयदेखि ४ सय किलो तरकारी संस्थाले उपभोक्तालाई विक्रि गर्दै आएको छ ।
संस्थाले हरियो तरकारी मात्रै नभएर खाद्यान्न पनि सुलभ मुल्यमा विक्रि गर्दै आएको छ । खाद्यान्न, तरकारी अर्डर गरेको २४ घण्टा भित्रै संस्थाले उपभोक्ताको घरमै पुर्याउँदै आएको छ । सदस्य तथा आम उपभोक्ताहरुलाई संस्थाका उपकार ब्राण्डका खाद्य सामाग्रीहरु पनि घरघरमै पुर्याउँदै आएको छ । यसबाट कालो बजारी हुनबाट रोकेको र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामग्री उपभोग गर्न पाएका छन् ।
कोरोना रोकथामका लागि देशभर लकडाउन लागिरहेको समयमा आफ्नै घरमा हाते ट्रयाक्टर आएपछि स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–८ का कृषक मनबहादुर सार्की दंग परेका छन् । आफ्नै घरमा सहुलियत दरको हाते ट्रयाक्टर आएपछि सार्कीले भने, “मैले त सोचेकै थिइन, यस्तो बेला घरमै ट्रयाक्टर आउला भनेर ।”
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगतको सुन्तला सुपरजोन कार्यान्वयन कार्यक्रमले आफ्नै घरमा ट्रयाक्टर ल्याएपछि वालिङ नगरपालिका–४ का कृषक ख्यामराज गुरुङ पनि निक्कै उत्साहित छन् । कोरोनाले यो पटक सुन्तला उत्पादनमा नराम्रो असर पार्ने गुरुङ्लाई चिन्ता थियो तर जग्गा खनजोतका लागि समयमै ट्रयाक्टर घरमै आएपछि उनी उत्साहित भएका हुन् ।
सुन्तला सुपरजोनले ५० प्रतिशत सहुलियतमा हाते ट्रयाक्टर कृषकलाई उपलव्ध गराएको हो । सुपरजोनको साझेदार संस्था पोखराको शिव शिखर एग्रो तथा शिव शिखर कृषि सहकारीले समयमै हाते ट्रयाक्टर उपलब्ध गराएपछि स्याङ्जाका कृषक उत्साहित भएका छन् ।
कृषकलाई समूहको सिफारिसका आधारमा शिव शिखरमार्फत कृषकलाई घर–घरमै ट्रयाक्टर पु¥याइएको सुपरजोन स्याङ्जाका अध्यक्ष बोधराज अर्यालले बताए । उनले भने, “प्रतिकूल परिस्थितिका कारण पर्याप्त हाते ट्रयाक्टर जिल्लामा नआउने भयो भन्ने चिन्ताले सताएको थियो, तर समयमै ट्रयाक्टर दिन पाउँदा उत्साहित कृषक देखेर खुसी लागेको छ ।”
सुपरजोनले चालू आवमा जिल्लामा १ सय १५ थान हाते ट्रयाक्टर वितरण गरिने अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । हालसम्म ९५ थान वितरण गरिएको अर्यालले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सहुलियत दरमा कृषकलाई हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेको बताउँदै भने, “साझेदार शिव शिखरले ढुवानी निःशुल्क गरिदिँदा यो पटक भने सस्तो मूल्यमा ट्रयाक्टर दिन सकियो ।”
कृषकलाई चलाउन र सामान्य मर्मत गर्ने तरिका सिकाई दिएपछि कृषक निक्कै उत्साहित भएको अनुभव सुनाए शिव शिखर एग्रोका सेल्स म्यानेजर शंकर आचार्यले । उनले भने, “कृषकको उत्साह देखेपछि हामीले कृषकलाई निरन्तर मर्मत र आवश्यक सहयोग गर्ने बचनसमेत दिएका छौं ।”
गण्डकी प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसायमा गर्दै आएका कृषकलार्ई सहयोग गर्दै आएको शिव शिखरका क्षेत्रीय प्रबन्धक सुशील बानियाँले बताए । उनका अनुसार साना कृषकलाई सहुलियत दरमा हाते ट्रयाक्टर उपलव्ध गराएको जानकारी दिए । कृषकले तत्काल पूरा रकम बुझाउन नसके ५० प्रतिशतको सहुलियत फाइनान्स गर्ने व्यवस्था गरेको पनि बानियाँले सुनाए ।
लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला देशको वित्तीय क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा बैंकमा भएको रकम निकाल्न पनि मानिसहरुलाई समस्या परिरहेको छ । तर भक्तपुरको एक सहकारीले भने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यकता हुँदा घरमै पुगेर रकम दिने गरेको छ ।
घरदैलो कार्यक्रम नाम दिइएर भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित शिव शिखर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले लकडाउनका समयमा पनि आफनो सेवालाई जारी राखेको छ । संस्थाले घर दैलो सेवादेखि कोरोनाबाट सुरक्षित रहदै उसले आफना सबै शाखाबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि कतिपय सर्वसाधारणलाई वित्तिय संस्थासम्म पुग्न समस्या भइरहेको अवस्थामा शिव शिखरले घर घरमा खाद्य सामग्री समेत पु¥याउन सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सहकारीले पोखरामा कृषि एम्वुलेन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसका साथै शिव शिखर कृषि सहकारीले ग्राहकलाई २ देखि ५ प्रशिसत सम्म ब्याज छुट दिने निर्णय समेत गरेको छ । उसले विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई सहकारी मार्फत सहुलियत दरमा ग्राहकसम्म पु¥याउने योजना समेत बनाएको छ । यसैगरी शिव शिखर कृषि लिमिटेडले बाँकेको कोहलपुरमा यसै वर्ष कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल यस संस्थाका विक्री तथा सेवा केन्द्रहरु चितवन, पोखरा कोहलपुर, डडेलधुरा, भक्तपुर र धनगढी शाखाबाट सेवा दिदै आएको छ । हाल शिव शिखर कृषि सहकारी संस्थाका देशभर ६ वटा शाखा रहेका छन ।
कोरोना भाईरसका कारण हरेक क्षेत्र त्रसित भयको अवस्थामा आर्थिक मन्दिका कारण धेरै कलकारखाना, उधोग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा धेरै श्रमजिवि श्रमिकहरुको श्रम खोसियको छ ।
यसले गर्दा श्रमिकहरुपनि विपदमा भएकोले संस्थाले अति विपन्न श्रमिकहरुलाई शिव शिखर सहकारीको उत्पादन उपकार ब्राण्डका खाद्य सामाग्री बितरण गरेको संस्थाका पोखरा सेवा केन्द्रका मुख्य सह प्रवन्ध निर्देशक शुसिल बानियाले बताए । उनले पोखरा महानगरपालिका लाई एक लाख मूल्य बराबरको आधुनिक स्प्रे ट्याङ्क सहयोग गरेको र भोलीका दिनमा पनि संस्थाले नगरबासी तथा विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्ने बताए ।